ဘာသာရေးကြောင့် လမ်းမှန်ရောက်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်ကို ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ ယုသန္တာတင် - Tha Dinn Oo
ဘာသာရေးကြောင့် လမ်းမှန်ရောက်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်ကို ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ ယုသန္တာတင်
Posted by hanminhtet February 15, 2020 in Uncategorized
အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာလျှောက်လှမ်းလာတာလည်း အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး သူမကိုအားပေးချစ်ခင်တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း အများအပြားပါပဲ။
ကျော့ရှင်းမှုတွေနဲ့ အချိန်တိုင်းမှာလှသွေးကြွယ်နေတဲ့ မင်းသမီးလေးယုသန္တာတင်တစ်ယောက် အမြဲလိုလို နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေထွက်တတ်ပြီး ခရီးသွားရတာကို သဘောကျသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒီလိုခရီးတွေသွားရင်းနဲ့ပဲ သူမ သွားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ပြည့်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယုသန္တာတင်က ဘုရားတရားကြောင့် လမ်းမှန်ပေါ် လျှောက်ခဲ့နိုင်ကြောင်း ခုလို ရင်ဖွင့်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။“မိတ်ဆွေ ဘဝ မှာ အမြဲ အောင်မြင် ပျော်ရွှင် ဖူးသလို လဲကျတဲ့ အခါ မျိုးတွေ လဲ ရှိခဲ့ ဖူးပါတယ်။
အဲ့လိုအချိန်မျိုးက ကိုယ့်နားမှာ ဆွဲထူ ကူပေးတတ်ကြ သူတွေ နဲ့ တွန်းကန်ချ သူတွေ ရဲ့ လူတွေရဲ့ ဟန်ဆောင်မျက်နှာ ဖုံး နဲ့ စိတ်ရင်း မှန်တွေကိုလဲ သိရတတ်တယ်။ မခံချင်စိတိနဲ့ ပြန်လည် ရုန်းကန် ထဖူးသလို တခါတ လေ အားလုံးနဲ့ ဝေးရာကို ကိုယ်လွတ် ရုန်း သွားချင်တဲ့ အခါ မျိုးတွေ လဲ ရှိတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုမေးကြည့်တယ် fly or fight ဘာ ရွေးမလဲပေါ့! အဖြေ ဘယ်တော့မှ မရေ ရာ ခဲ့ဖူး။”
“ စမ်းတဝါး ဝါးနဲ့လဲ အကြာကြီးလမ်းပျောက်ဖူးတာပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ့်ယုံကြည်ရာ ဘာသာရေး က ပဲ ကိုယ့်စိတ် ကို အထောက်ပံ့ ပေးပါတယ်။ စိတ်တည်ငြိမ်လာတယ်။ အမှန်ကို ဆုံးဖြတ် တတ်လာတယ်။ကယောင်ကတမ်း နဲ့အမှားတွေ အများကြီး မလုပ်မိတော့ဘူး။ နောက်ဆုံးလမ်းမှန် ပြန်ရောက်လာတယ်”“မိတ်ဆွေ တို့ရော အဲ့လိုအချိန်မျိုး ကြုံဘူးလား ဘယ်လိုရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းလဲ
လဲကျတာ ရှက်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြန်မထ နိုင်တာလဲ ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ လဲကျ ရင်ကြိုးစားပီး ပြန်ထ နိုင်ရမယ်လေ။ လောကကြီးအမြဲ တလှညိ့စီ လည်နေပါတယ် ဆိုးတဲ့အချိန် ရောက်နေရင် ကောင်းတဲ့အချိန် အတွက် ပြန်စောင့် ရမယ်လေ စိတိကောင်းလေး ထားရင်းနဲ့ပေါ့” ဆိုပြီး ခံစားချက်ကို ရင်ဖွင့်ရေးသားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာေလွ်ာက္လွမ္းလာတာလည္း အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး သူမကိုအားေပးခ်စ္ခင္တဲ့ပရိသတ္ေတြကလည္း အမ်ားအျပားပါပဲ။
ေက်ာ့ရွင္းမႈေတြနဲ႔ အခ်ိန္တိုင္းမွာလွေသြးႂကြယ္ေနတဲ့ မင္းသမီးေလးယုသႏၲာတင္တစ္ေယာက္ အၿမဲလိုလို ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ေတြထြက္တတ္ၿပီး ခရီးသြားရတာကို သေဘာက်သူတစ္ေယာက္ပါ။ ဒီလိုခရီးေတြသြားရင္းနဲ႔ပဲ သူမ သြားခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ ျပည့္သြားခဲ့ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။
ယုသႏၲာတင္က ဘုရားတရားေၾကာင့္ လမ္းမွန္ေပၚ ေလွ်ာက္ခဲ့ႏိုင္ေၾကာင္း ခုလို ရင္ဖြင့္ေျပာျပလိုက္ပါတယ္။
“မိတ္ေဆြ ဘဝ မွာ အၿမဲ ေအာင္ျမင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ ဖူးသလို လဲက်တဲ့ အခါ မ်ိဳးေတြ လဲ ရွိခဲ့ ဖူးပါတယ္။အဲ့လိုအခ်ိန္မ်ိဳးက ကိုယ့္နားမွာ ဆြဲထူ ကူေပးတတ္ၾက သူေတြ နဲ႔ တြန္းကန္ခ် သူေတြ ရဲ႕ လူေတြရဲ႕ ဟန္ေဆာင္မ်က္ႏွာ ဖုံး နဲ႔ စိတ္ရင္း မွန္ေတြကိုလဲ သိရတတ္တယ္။
မခံခ်င္စိတိနဲ႔ ျပန္လည္ ႐ုန္းကန္ ထဖူးသလို တခါတ ေလ အားလုံးနဲ႔ ေဝးရာကို ကိုယ္လြတ္ ႐ုန္း သြားခ်င္တဲ့ အခါ မ်ိဳးေတြ လဲ ရွိတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုေမးၾကည့္တယ္ fly or fight ဘာ ေ႐ြးမလဲေပါ့! အေျဖ ဘယ္ေတာ့မွ မေရ ရာ ခဲ့ဖူး။”
“ စမ္းတဝါး ဝါးနဲ႔လဲ အၾကာႀကီးလမ္းေပ်ာက္ဖူးတာပဲ။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ကိုယ့္ယုံၾကည္ရာ ဘာသာေရး က ပဲ ကိုယ့္စိတ္ ကို အေထာက္ပံ့ ေပးပါတယ္။ စိတ္တည္ၿငိမ္လာတယ္။ အမွန္ကို ဆုံးျဖတ္ တတ္လာတယ္။ကေယာင္ကတမ္း နဲ႔အမွားေတြ အမ်ားႀကီး မလုပ္မိေတာ့ဘူး။ ေနာက္ဆုံးလမ္းမွန္ ျပန္ေရာက္လာတယ္”“မိတ္ေဆြ တို႔ေရာ အဲ့လိုအခ်ိန္မ်ိဳး ႀကဳံဘူးလား ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းလဲ
လဲက်တာ ရွက္စရာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပန္မထ ႏိုင္တာလဲ ရွက္စရာမဟုတ္ပါဘူး။ လဲက် ရင္ႀကိဳးစားပီး ျပန္ထ ႏိုင္ရမယ္ေလ။ ေလာကႀကီးအၿမဲ တလွညိ့စီ လည္ေနပါတယ္ ဆိုးတဲ့အခ်ိန္ ေရာက္ေနရင္ ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ အတြက္ ျပန္ေစာင့္ ရမယ္ေလ စိတိေကာင္းေလး ထားရင္းနဲ႔ေပါ့” ဆိုၿပီး ခံစားခ်က္ကို ရင္ဖြင့္ေရးသားလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
သက်ထားသူဇာ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံတကာ ကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲတွင် ကွာတားဖိုင်နယ် တက်ရောက်
(၂၀၁၉) အကယ်ဒမီအတွက် ဆန်ကာတင်ကား (၆)ကားတောင်ပါဝင်နေတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
မိမိနာမည်ကိုအသုံးပြုကာ အထင်လွဲမှားစရာတွေတင်နေတဲ့ အကောင့်တုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်ကိုကူညီပေးဖို့ပြောလိုက်တဲ့ ခြူးစစ်ဟန်
နိဗ္ဗာန်အလားထင်ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လှပတဲ့နေရာတွေနဲ့ အတူ ပုံတွေတင်လိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်
မျက်ရည်ချုတတ်ဖို့ ကြိုးစားရဦးမယ်ဆိုတဲ့ စံရတီမိုးမြင့်